Warshad shaati aasaasi ah - Shiinaha Soosaarayaasha shaatiga aasaasiga ah, Alaab-qeybiyeyaal
Shaati aasaasi ah
xafiiska xafiiska caadadii dharka suuf button caadadii em ...
caadadii xayeysiis jaban jumlad 100% poly ...
caadadii haweenka seddex-geesood ah 50% polyester 25% cotto ...
caag daabac caado caag ah oo shaqeynaya astaan ​​shaati
caadadii daabacaadda shaashadda caadigaa ma jiro nooc jilicsan oo jilicsan ro aasaasiga ah ...
caadadii daabacaadda shaashadda pl ...
1.Waa maxay funaanadda saddexda ah ee quruxda badan ...
Fangda Shang Shang Building, No.888, Chuangxin first Road, Gaoxin Area, Degmada Qinshanhu, Nanchang, Jiangxi, China
Alaabada Marathon-ka ah iyo Qalabka
Marka laga hadlayo dadaallada samafalka iyo dhacdooyinka, marathons waxay ka mid yihiin xulashooyinka ugu caansan ee halkaas ka jira. Marathon wuxuu u oggolaanayaa orodyahannada inay muujiyaan awooddooda, kartidooda iyo u heellan ...
Waa maxay Dharka Ilaalinta Qorraxda? Wh ...
Haddii aad tahay bad-mareen firfircoon, biyo-doon ama biyo-biyood, waxaad u badan tahay in lagaa cawday inaad mar kasta oo aad jeedsato ku sunto qoraxda. Ka dib oo dhan, waxaa lagugula talinayaa inaad rea ...
Waa maxay dharka saddex-geesoodka ah? Waa maxay sababta ...
Waa maxay sababta funaanadda saddexda ah ee quruxda badani u kulul tahay? Markuu macmiilkaygu raadsado talo ku saabsan xulashada shay uu sameeyo shaadh caadi ah, waan hubaa inaan ku taliyo. Haddii aad i weydiin lahayd sababta, waxaan kuu sheegi lahaa in a tr ...